यो उमेरमा महिलाहरुले दिन्छन् यौन सन्तुष्टि, नयाँ तथ्य सार्वजनिक ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
यो उमेरमा महिलाहरुले दिन्छन् यौन सन्तुष्टि, नयाँ तथ्य सार्वजनिक !
काठमाडाैं । यौन बढी आनन्ददायी कुन उमेरमा हुन्छ भनेर एक अध्ययनले नयाँ कुरा पत्ता लगाएको छ । अनलाइन मार्फत एक यौन खेलौना उत्पादक कम्पनीले गरेको अध्ययनले महिलाहरुले २८ वर्षको उमेरमा गरिने सेक्सबाट बढी आनन्द उठाउँने तथ्य फेला पारेको छ ।
तर पुरुषको हकमा भने सेक्समा सबैभन्दा धेरै मज्जा लिने उमेर ३३ वर्ष रहेको बताइएको छ । महिलाहरुले २८ वर्षको उमेरमा सेक्सबाट सबैभन्दा धेरै आनन्द लिने भएपनि उनीहरु २५ वर्षको उमेरमा सेक्सको मामिलामा धेरै सक्रिय हुन्छन् ।
त्यस्तै महिलाहरुले औषतमा १७ वर्षको उमेरमा आफ्नो कुमारित्व गुमाउने गरेका छन् । यस्तै पुरुषहरुको हकमा औषतमा १८ वर्षको उमेरमा उनीहरुको भर्जिनिटी तोडिने र २९ वर्षको उमेरमा सेक्सको मामिलामा सबैभन्दा बढि सक्रिय हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ । यसअघिको अर्को अध्ययनले भने पुरुषले १८वर्ष तथा महिलाले ३० वर्षको उमेरमा सेक्समा सबैभन्दा धेरै मज्जा लिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस विवाह गरेकै दिन यौनसम्बन्ध स्थापित गर्नु ठिक हाे वा हाेइन ? जानी राखाैं
३०,बैशाख.२०७६,सोमबार १२:४४ मा प्रकाशित
← म्यूजिक नेपालका म्यानेजर पक्राउ
४ अर्ब ४३ करोडको तेल भारत निर्यात →